Vaovao - Fitaovana Locsmith-9in1 HUK fanidiana fiara mandeha ho azy
Iray; Auto lockpick 9in1 mamaha fitsipika; (malefaka sy mafy)
Raha teôria dia mila tsindriana ny fonosana tsirairay (indraindray hosokafana izy io raha tsy tsindriana, azo inoana fa vokatry ny marim-pototra asa-tanana)
Rehefa manondro ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny jiro fibre optic ianao dia ampiasao ny dial mba hitsapana. Ho kitihina ny sarimihetsika raha mafy izany, ary tsy ho kitihina ny horonantsary raha elastika. (Ny tsy mihetsika dia midika hoe eo ambany hery ny cleat, ny midika fa ny cleat dia tsy eo ambany heriny)
Amin'ny dingan'ny famohana dia tsy mila manindry ilay sombin-kery mitondra hery fotsiny isika hahitantsika ny malefaka sy ny mafy (tadiavo ny mafy avy amin'ireo takelaka hidy maro ary kitiho)
Roa; ny fomba fiaraha-miasa amin'ny fitaovana fifantenana,
1 Fikosehana fisaka;
A. Tsy azo jerena mazava tsara amin'ny fotoana iray ny sarimihetsika sasany, ary sarotra ny manindry azy ireo. Izy ireo dia hidin-trano mihodina hatrany. Avy eo mampiasa fanjaitra mahitsy handramana moramora sy hifanaraka amin'ny 45 roa. Indrindra fa an'ny ankehitriny ny an'ny sarimihetsika ambony ary ny faharoa an'ny an'ny sarimihetsika ambany rehefa mihidy ny hidiny (ohatra, raha ny tapany voalohany amin'ny NSN14 dia ny laharana faha-4 ary ny ampahany manaraka dia ny laharana 1 ), ny fanjaitra mahitsy dia sarotra atoro anao amin'izao fotoana izao, noho izany dia mila mandeha 45 ianao. Cleat mifanaraka amin'izany
(Arakaraky ny hidiranao ao anatiny no mahasarotra kokoa ny mijery azy) Ny fomba manokana dia ny maninjitra ny fanjaitra mahitsy hatrany anaty, manindry ireo sombin-javatra rehetra, ary avy eo dia esory moramora ny fanjaitra mahitsy, mba hahafahanao mijery ny hahavony ny hidin-trano sy ny isan'ny sombin-javatra (tsy Ataovy azo antoka fa afaka miantehitra amin'ny feon'ny takelaka hihainoana) ianao.
B, misy ihany koa ny fikosoham-bary fisaka (ToY43 sy TOY43AT) manokana noho ny toetran'ny firafitra, mieritreritra aho fa mila ampifanarahana amin'ny No. 67
TOY43 (zarao roa ny sombin-javatra iray ary apetaho amin'ny toerana fanidiana iray ihany - sombina, sarotra ny manindry ireo sombin-javatra ireo miaraka amina fanjaitra mahitsy na 45 ora)
TOY43AT dia manasongadina, (ny takelaka hidy dia miendrika trapezoid, ary misy taolan-tehezana manohitra ao anaty hidy, izay manakana ny fitaovana tsy hiditra, izay mampitombo ny fahasarotana)
Amin'ity fotoana ity dia heveriko fa tsara kokoa ny mampiasa ny sisiny fanampiny amin'ny No. 67 hanindriana ireo sombin-javatra na hisorohana ny taolan-tehezana manodina hampandeha ny fotoana fisokafana.
2 Vohay ny hidin-trano fanodinana anaty toy ny (HU66 HU100 HU92 ,,,)
Eo ambanin'ny hazavan'ny jiro mirehitra dia afaka mijery mivantana ny ankamaroan'ny takelaka hidy isika, ary ny herin'ny takelaka fanidiana ihany no ahitantsika maso.
Raha mitohy manantitrantitra ny sarimihetsika iray, dia misy roa azo atao.
A, Bo Tsai nihatokatoka be loatra tamin'ny sarimihetsika. Amin'izao fotoana izao dia mila maivamaivana kely ny fitaovana Y. Mba hisorohana ny fisidinan'ny cleats hafa dia manandrana mamadika faran'izay betsaka araka izay azo atao izahay.
B, mbola tsy navoaka ny takelaka fanidiana (tohizo ny fanindriana ny takelaka hidin-trano)
3 sokafy ny hidin'ny fiara fikosoham-bary ivelany toy ny (HU101 HHU64)
Ny ampahany manahirana indrindra amin'ity karazana hidin-trano ity dia ny tahotra ny fipihana be loatra amin'ny hidin-trano (tsy azo ahodina toy ny hidy fikosoham-bary ny hidin-trano), noho izany dia mila mandinika ianao rehefa manokatra io hidin-trano io
A; Fehezo ny elanelana izay ihetsehan'ny Pozi isaky ny mandeha mba tsy hanindriana ireo vavahady mifanila aminy
B; Ny herin'ny fanindriana ny sombin-hidiny dia tokony hapetraka miadana mba hisorohana ny kitapo hidin-tsika
C; Rehefa ny sanganasa farany 1 sy 2 farany fotsiny no tsindriana, manandrama hiara-hiasa amin'ny laharana faha-89 hanindriana mba tsy hanimbana ilay fitaovana
Ireto toro-hevitra etsy ambony ireto dia:
Fanidiana fiara fikosoham-bary fisaka 1. 2.4.5 fikosoham-bary anatiny 1.3.8.9 Fikosehana ivelany; 1.3.8.9
Ho fanampin'izay, No. 2 (sokafy ny firafitra ambony sy ambany, tsy tokony ho lehibe loatra ny latsaka ary ny ivelany efatra. Ny tsara kokoa dia ny manosotra lavaka kely amin'ny sisiny ambony sy ambany mba tsy ho solafaka rehefa tsindry ny puce. It dia nisy vokany mahagaga tamin'ny taloha Mercedes-Benz HU39, BMW, HU58, Volvo, NE66 satria nampiana lohataona ireo hidin-trano ireo.
Telo; ny fomba fampiasana tsara ny rakitra Y
Amin'ny dingan'ny famohana sy fampidirana hery, ny fitaovana Y dia ampiharina miadana. Aza manampy hatramin'ny farany. Hahatonga ny takelaka hidy ho mafy loatra sy sarotra hanombohana ny takelaka fanidiana. Raha tsindriana an-keriny ny takelaka hidy, mety ho simba ilay fitaovana ary azo kitihina ny takelaka hidy.
Rehefa tsindrio ilay horonantsary hidy ary mila lalaovina dia miadana koa ny fizotran'ny playback. Raha tsy izany dia hianjera ny sasany amin'ireo hidin-trano navoaka. Noho izany, na nosokafana na nilalao dia alefa miadana izy. Rehefa mahatratra ny zoro mety ny sarimihetsika dia hisaraka ara-dalàna ny horonantsary.
Ireto fanehoana an-tsoratra manaraka ireto dia mifototra amin'ilay sary etsy ambony ho ohatra;
No. 1; fanjaitra mahitsy (afaka manokatra haingana ny hidin'ny varavaran'ny fiara izay tsy andry ilany, ny fiheverana azy dia ny tsy tokony ho lehibe loatra ny rano mitete. Raha lehibe loatra ny rano indray mitete, ny fiaraha-miasa amin'ny tanan'ny roa tonta dia manjavozavo ary ampiasaina ny fomba fanokafana hanitatra ny ora fisokafana)
No. 2; loha boribory (sokafy ny firafitra ambony sy ambany, tsy tokony ho lehibe loatra ny filatsaka ary ny efatra ivelany, tsara kokoa ny manosika lavaka kely amin'ny sisiny ambony sy ambany mba hisorohana ny fivezivezena rehefa mahita ny puce. Misy vokany mahagaga ho an'ny Mercedes-Benz HU39 taloha, BMW HU58, Volvo NE66 satria ireo dia mihidy lohataona sahy)
No. 3; Angady (sokafy ny hidim-baravarana anatiny sy ivelany rehetra toy ny Mercedes-Benz sy BMW, anisan'izany ny Mercedes-Benz sy BMW taloha (asaina mampiasa angady ianao amin'ny dingana voalohany hanodinana ny laharana 2 amin'ny dingana manaraka) TOY2 Toyota fikosoham-bary anatiny lalana roa tsy azo sokafana amin'ny angady (kely loatra ny habaka, misy No. 1 dia somary miondrika hisokatra), BYD series TOY2 dia azo sokafana amin'ny angady!
45; Soavaly soavaly (iray ambony sy ambany, miaraka amin'ny rafitra fanokafana mpanampy No. 1 ary ny fidinana lehibe, laharana 1 sy 2 no azo ampiasaina raha kely ny rano mitete, raha kely ny filatsaka dia ampiasao ny No. 45, izay somary manahirana ihany. tsy mihetsika ao anatiny, indrindra ny hidy rehefa misy sarimihetsika avo ny lafy ambony sy ambany amin'ny vava)
67; miampy soavaly amina soavaly (azo lazaina ho ambony sy ambany izy io na azo lazaina ho ambany sy ankavanana sy ambony ambony, miaraka amin'ny fanidiana andiana TOY43AT fanampiny mpanampy voalohany sy ny hidiny TOY43 No. 4, sombin-javatra 7 (tapany roa mitovy slot hidin-trano) miaraka (hisorohana ny fanindriana fotsiny hatramin'ny antsasaky ny vatan'ny hidin-trano)
89; Angady antsasaky ny sisiny (hanampy amin'ny fanokafana ny hidin-kavia havia sy havanana, nefa koa bokotra kely (toy ny HU64 HU101) rehefa nosokafana haingana ny hidiny, mpanampy tsara izy raha manampy hery)
Fehiny: Raha ampiasaina tsara amin'ny jiro fibre optika ilay fitaovana dia afaka manokatra ny hidin-trano rehetra izay tsy andry ilany. Ny fizotran'ny fanokafana dia mila fiaraha-miasa amin'ny tanana roa. Aza manindry mafy